10ka ugu sarreeya Hagaha Treadmill Ey iyo Dib u eegis (2022)
Bogga ugu weynEeyaha Daryeel10ka ugu sarreeya Hagaha Treadmill Ey iyo Dib u eegis (2022)
Eeyaha DaryeelSheekooyinka Eyga oo Daalacanaya
Markii ugu dambeysay ee la cusbooneysiiyay Janaayo 20, 2022 Eeyaha Vets
Hagaha Iibka Treadmill eey
Waa maxay faa'iidooyinka Isticmaalka Ey Treadmill?
Sida loo doorto Treadmill eeyga ugu fiican ee dibadda?
Sida loo doorto Modelka Treadmill eeyga saxda ah ee ay eeyahaagu u baahan yihiin?
Treadmills Ammaan ma u yihiin Eeyaha in la isticmaalo?
10ka ugu sarreeya ee lagu tumanayo eeyaha
#1. DogPACER Treadmill
#2. Cabbirka Buuxa ee Eyga Pacer Treadmill 91641 LF 3.1
#3. DogTread Premium Treadmill ee Ey Yaryar
#4. GoPet Treadmills ee Eeyaha Waaweyn iyo Bar Leash
#5. The PETSITE Dog Treadmill ee Eeyaha Yaryar & Dhexdhexaadka ah
#6. BINGBING Smart iyo Motorized Dog Treadmill
#7. SRFDD Eyga Treadmill ee eeyaha Yaryar, Dhexdhexaadka ah, Weyn
#8. DogPacer Mini Treadmill ee Eyga
#9. GoPet – PetRun – Treadmill Eeyaha Yaryar – PR700 ee Jimicsiga Eeyga
#10. Gopet Petrun Treadmill ee Eeyaha Waaweyn
5-ta nooc ee ugu Wanaagsan ee Treadmill eey ee 2019
1. ProForm - Calaamadaha Ey Treadmill
2. NordicTrack - Ey Treadmill Brands
3. Weslo Treadmill - Noocyada Treadmill eey -
4. Caafimaadka Qorraxda & Jirdhiska - Ey Treadmill
5. Nautilus Dog Treadmills - Ey Treadmill
Su'aalaha Dadku Waydiiyaan
Waa maxay sababta ka danbaysa qiimaha sarreeya ee mishiinka lagu tumayo?
Sideen ula qabsadaa mashiinka treadmill-kayga si aan uga dhigo mid eyda ku habboon?
Sideen eygeyga ula qabsan karaa mashiinka lagu tumanayo?
Waqti intee le'eg ayaan u ogolaanayaa eeyga inuu ku ordo mashiinka treadmill?
Waa maxay sababta ay eeyadu uga soo horjeedaan qalabka lagu tumayo?
In eey la saaro mishiinka lagu tumayo ma mid naxariis daran?
Miyay mamnuuc tahay qalabka lagu tumanayo eeyga?
Waa maxay faraqa u dhexeeya mishiinka lagu tumayo eeyaha iyo kan bini'aadamka?
Suurtagal ma tahay in uu ilmuhu ku ordo mashiinka lagu tumayo?
Ey socodkaagu ma yahay nooc jimicsi?
Eeyadu ma awoodaan inay ku ordaan treadmills caadiga ah?
Waa imisa qiimaha mashiinka lagu tumo?
Mishiinka lagu tumayo ee qiimaha jaban miyuu mudan yahay maalgashiga?
Goorma ayay tahay wakhtiga ugu fiican ee la iibsan karo treadmill?
Miyaad haysataa maalin mashquul ah laakiin waxaad rabtaa saaxiibkaaga afarta lugood leh inuu helo jimicsiga uu u qalmo? Jimicsiga eygaaga waa ay adagtahay maalmaha mashquulka ah iyo cimilada xun. Mar dambe ha werwerin sababtoo ah eyga ku tumanaya ayaa xallin kara dhibaatooyinkan. Waxa ay kabid weyn ka dhigtaa habka jimicsiga ee eygaaga.
Waxaan baarnay fursadaha xulashada eey ku tumashada iyo taayirrada ugu fiican.
Maqaalkani wuxuu ku siinayaa macluumaad ku saabsan waxa ay yihiin kuwa ku tumanaya eyda, sida ay u shaqeeyaan, iyo waxa ay u qabtaan saaxiibkaaga dhogorta leh.
Eyga lagu tumayo waa hab fiican oo lagu jimicsado eeyga, gaar ahaan haddii aadan awoodin inaad ku socoto. Qalabka lagu tumanayo eeydu waxay kaa caawin karaan inuu xayawaankaaga caafimaad qabo oo faraxsanaado inta aad mashquulsan tahay.
Qalabka lagu tumanayo eeyga ugu fiican wuxuu noqon doonaa mid waara, fududahay in la isticmaalo, wuxuuna yeelan doonaa sifooyin kala duwan oo ka dhigi doona mid ku raaxaysan doona xayawaanka iyo mulkiilaha labadaba.
Qalabka lagu tumayo eeygu waa hab aad u fiican oo lagu siin karo eygaaga jimicsi iyada oo aan khatar loo helin culays dheeraad ah. Waxa kale oo ay siisaa kicinta maskaxda xayawaankaaga, taas oo kaa caawin karta dhimista caajiska iyo welwelka.
Qaar ka mid ah faa'iidooyinka isticmaalka treadmills ee eeyaha waa:
Waxay yaraynaysaa culayska ka saaran kala goysyada iyo murqaha
Waxay ka caawisaa inay ilaashadaan miisaan caafimaad leh
Waxa ay siinaysaa in ay jimicsi sameeyaan iyaga oo aan khatar ugu jirin culays badan
Waxay bixisaa kicin maskaxeed kaas oo kaa caawin kara dhimista caajiska iyo welwelka
Eyga dibadda lagu tumo waa hab fiican oo lagu siiyo jimicsi iyo madadaalo xayawaankaaga. Waxay sidoo kale yihiin hab fiican oo aad uga ilaalin karto inay burburiyaan dayrkaaga, laamiyadaada, iyo alaabta gurigaaga.
Waxa ugu muhiimsan ee la tixgeliyo marka aad raadinayso qalabka ugu fiican ee eyga dibadda ah waa nooca dusha uu ku jiri doono. Waxaad doonaysaa mishiinka lagu tunto oo xamili kara sagxadaha kala duwan iyadoon ku dheggan ama dhaawacmin.
Tixgelin kale oo muhiim ah waa xajmiga treadmills. Waa in ay ahaataa mid weyn oo ku filan in xayawaankaagu u isticmaalo si raaxo leh laakiin aan aad u weynayn oo ay ku qaadanayso meel aad u badan oo daaradaada ah.
Noocyada ugu caansan ee treadmills waa kuwa leh muuqaal soo jiidasho leh iyo kuwa leh makiinada biyaha ee ku dhex jirta.
Sida Loo Doorto Xuquuqda Ey Treadmill Moodeelka Baahidaada Eeyaha?
Dad badan ayaa waydiinaya haddii qalabka lagu tumayo ay u fiican yihiin eeyaha. Jawaabtu waa haa, laakiin dhammaan moodooyinka kuma habboona baahida xayawaankaaga. Waa inaad doorataa nooc si gaar ah loogu talagalay eyda iyo baahidooda.
Ogow inta boos ee eeygaagu u baahan yahay.
Go'aanso nooca giraangiraha iyo deyrka ku habboon xaaladdaada.
Ogow cabbirka iyo dhererka aad rabto in eygaaga ku tumanayo inuu ahaado.
Ka fakar sida aad u rabto in eygaagu u galo aagga treadmill.
Soo hel nooc tuman oo ku habboon baahiyahaaga.
10ka alaab ee ugu sarreeya ayaa ka dhigay liiska ugu dambeeya. Waxaad ka heli doontaa faallooyin iyo hagaha xagga hoose.
Waxaan sidoo kale ku daray faa'iidooyinka iyo khasaaraha. Waxqabadka guud iyo shaqeynta, DogPacer Dog Treadmill waa ikhtiyaarka ugu fiican.
Waxay qabataa shaqo cajiib ah oo ka mid ah dhammaan qalabka lagu tumanayo eeyaha ee dib u eegistayada, taasoo u oggolaanaysa eygaaga inuu helo jimicsiga ay u baahan tahay. Haddii aad hore u ogeyd waxaad u baahan tahay, halkan waxaa ah xiriirinta degdega ah ee alaabta:
Dog Pacer 91641 LF 3.1 Cabbirka Buuxa eey Pacer Treadmill
GoPet Treadmills ee Eeyaha Waaweyn
PETITE Dog Treadmill, ee Eeyaha Yaryar & Dhexdhexaadka ah
XABSIGA EYGA Treadmill
SRFDD Dog Treadmill, Jimicsiga Xayawaanka Treadmill
GoPet PetRun PR725 Treadmill ku lifaaqan
Jimicsi la'aantu waxay u horseedi kartaa eeygaaga inuu khuuriyo, inuu yeesho awood hooseeya, inuu noqdo qof aan waxba ka qabanayn, iyo inuu noqdo mid buuran. Eyda ku tumashada waxay leeyihiin faa'iidooyin kala duwan ee eeyaha iyo saaxiibadooda aadanaha labadaba.
Ku habboon jimicsiga gudaha xaaladaha cimilada xun ama maalmaha roobka.
Waxay ka caawisaa ilaalinta miisaanka eeyga caafimaad qaba.
Waxay ku siinaysaa door badbaado leh oo qurux badan oo aad ku jimicsato saaxiibkaaga canine.
Marka eygaagu ku jiro barnaamijka miisaan dhimista, runtii faa'iido ayay yeelan karaan.
Awooda eyga waxa lagu wanaajin karaa iyadoo loo ilaaliyo miisaan caafimaad leh. Haddii ay dhacdo in aad leedahay jadwal aad u dhib badan, helida qalabka lagu tumanayo eey waxa ay noqon kartaa beddelka kaliya ee aad ku leedahay.
Maqaalkan, waxaanu ku soo diyaarinay liis faahfaahsan oo ah 12ka ugu fiican ee lagu tumanayo eeyaha ee la heli karo 2020 si aad u tixgeliso.
Aan dul marno miraha eyda ugu fiican ee maanta suuqa ku jira.
AKHRI: Sheybaarku ma ka gardarro badan yihiin dibiyada godadka? 10 xaqiiqooyin ku saabsan Labrabull
dоgРАСER Miniрасr waxa si gaar ah loogu daalacday xashiishyada yaryar ee miisaankoodu dhan yahay 55 rodol. Waxay ku kalsoon yihiin tan yar ee eydu ku tumanayso gebi ahaanba birta adag ee sarkan.
Si buuxda ayaa loo rogi karaa. Intaa waxaa dheer, DоgРасer-ku wuxuu muujinayaa ilaalo dhinac ah si ay uga celiso eygaaga inuu ka cararo dhinacyada mashiinka. Dhinacyada dhinacyadu si diyaar ah ayaa loogu kaydin karaa.
Waxay leedahay hab-dhis badan oo dib-u-dhigis ah oo fayaqab iyo hab-firfircooni si ay u caawiyaan caafimaadka eygaaga. Dusha sare ee MiniРасer-ku wuxuu cabbiraa 38 ″ L x 16 ″ W. Waxay u janjeertaa xagal 45-degree ah waxayna leedahay xajin 0.5 ilaa 7.5 mayl saacadiiba.
Sifooyinka Muhiimka ah
Midka: Casaan iyo Blасk
Cabirka: 42 x 21.5 x 28.5 inji
Ku habboon eeyaha dhexdhexaadka ah, oo miisaankoodu yahay ilaa 55 rodol.
Ku ordaya: 38″ L x 16″ W
Dejinta xajin la hagaajin karo
Dib-u-dejinta jimicsiga eeyga oo samee jimicsiyo
Aad u macquul ah
U yeel caafimaadka eygaaga
Waxaa loo yaqaanaa inuu yahay qalab jimicsi lagu kalsoonaan karo oo eeyaha ah
Aad u fudud in la rakibo
Ilaalada dhinacyadu waa kuwo aan ammaan ahayn oo daciif ah.
# 2. The Cabbirka Buuxa eeyga Pacer Treadmill 91641 LF 3.1
The DogPacer LF 3.1 treadmill waa giraangiraha eeyga oo dhan kaas oo ku habboon eeyaha miisaankoodu yahay ilaa 179 rodol. Naqshadaynta svelte waa mid la qaadi karo oo fudud.
DogPacer LF 3.1 treadmill waxaa ku jira hababka jimicsiga ee horay loo sii qorsheeyay ee eygaaga.
Waxaad xitaa u habayn kartaa hawlahaaga joogtada ah shuruudaha hawleed ee gaarka ah ee eygaaga.
Meesha lagu tumanayo eeydu waxay leedahay aag orod oo ka badan 71 "x 16.5"" Matoorka aamusnaanta leh wuxuu ka ilaaliyaa eygaaga inuu cabsado inta lagu jiro jimicsiga.
Sifooyinkeedu waxay xaqiijinayaan in canines-kaagu ay jimicsigooda ku helaan dhib la'aan. Intaa waxaa dheer, dogPACER waxay ka heshaa dib u eegis heer sare ah onlayn.
Badeecada & Sumadda: DogPACER
Madow iyo casaan
76.77 x 27.6 x 47 gudaha.
Tusmada laalaabayo oo leh aagga orodka 71′′ X 16.5′′
Xadka miisaanka eeydu waa 179 rodol.
0.5-7.5 mph kala duwanaanshaha xawaaraha (0.1 kordhin)
Barnaamijyada socodsiinta shakhsi ahaaneed
Lagu qalabeeyay matoor aamusan-ilaa-shubasho
La qabsan kara cimilada oo dhan
Ku habboon dadka xasaasiyadda qaba
Ka qaybqaata ilaalinta miisaanka eeyga caafimaad qaba
Qalab lagu kalsoonaan karo
La qaadi karo oo fudud
Waxay marar badan dhalisaa qaylo.
#3. DogTread Premium Treadmill ee Eyga yar yar
Tagitaanka eeyga DogTread waxaa loogu talagalay eeyaha yaryar oo miisaankoodu yahay ilaa 60 rodol. Waa mid yar, adag, oo la isku halayn karo. Qalabka lagu tumanayo waxa lagu qalabeeyay mato shiish aamusan si loo hubiyo jawi jimicsi oo raaxo leh.
Console LCD ah iyo kantaroolka fog waxaa lagu soo daray DogTread yar eey ku tumanayso.
Badhamada Bilawga iyo Joogsiga ee Badbaadada ee cas ayaa kaa caawinaya joojinta tababarka haddii eeygaagu uu daalan yahay. Taayirada dhaqdhaqaaqa ayaa fududeynaya in la raro DogTread.
Saxarada godan waxay ku fiican yihiin bixinta ama kaydinta daawaynta inta uu eeygaagu socdo. Dhinacyadeeda isku laabma ayaa kaydinta ka dhigaya neecaw. Intaa waxaa dheer, DogTread waxay leedahay dib u eegisyo shabakadeed oo togan.
Midabka: Buluugga Brand: DogTread
44 x 20 x 21 inji cabbirka shayga ee eeyaha ilaa 30 rodol
Haysta daawaynta dib loo dhigay
Matoorka ku orda xawli aamusan
Dusha ordaya ee dabiiciga ah Jilicsan gacanta lagu hagaajin karo
Waxaa ku jira taayirrada daabulka
Xalka jimicsiga gudaha
Kantaroolka fog wuxuu ku darayaa la qabsiga tababarka.
Si ku habboon u qaybinta iyo kaydinta cuntooyinka fudud
Naqshad soo jiidasho leh iyo mid eyga labadaba leh
Waxay siisaa khibrad togan oo raaxo leh
Naqshad la qaadan karo oo meel badbaadisa
Tilmaamaha isu imaatinka way adag tahay in la raaco.
GoPet treadmill waxaa loogu talagalay eeyaha waaweyn oo miisaankoodu yahay ilaa 175 rodol. Waa il cajiib ah oo jimicsi u ah dhammaan eeyaha waaweyn, hadday yihiin kuwo nool ama cayilan. Waa beddel la aqbali karo marka cimiladu ka hortagto eeyaha inay dibadda joogaan. Hagaajin xawaaraha socodka madadaalada ama orodka degdega ah.
Dog TreadMills ee GoPet ayaa leh taayir dolly ah oo loogu talagalay gaadiid ku habboon. Intaa waxaa dheer, waxay leedahay isha bir ah oo lagu dhejiyo toy. Waxay ku habboon tahay milkiilayaasha eeyaha ee aan haysan meel ay ku ordaan oo lagama maarmaanka ah.
Summada GoPet Cabirrada: 90 x 26 x 22 in.
Eeyaha ku habboon cabbirkooda
Eeyaha miisaankoodu yahay ilaa 175 rodol.
Halbeegyada xawaaraha ee la hagaajin karo
Waxaa ku jira birta xadhigga ee eeyaha.
Meel jirka ah oo loogu talagalay eeyaha aadka u kacsan
Qaab fantastik ah oo jimicsi loogu talagalay canineska buuran
Marka cimiladu xumaato, qalabka jimicsiga eey waa lagama maarmaan.
Qalabka lagu tumanayo eeyaha aan haysan qol ay ku cararaan
Oggolow socod nasasho leh ama orod degdeg ah
Kuma haboonaan doonto noocyada yaryar ee alaabta lagu ciyaaro
Dhererka eyga ee PetSite wuxuu u oggolaanayaa canabkaaga inay ku jimicsato gudaha gudaha maalmaha roobka da'o iyo cimilada xun. Treadmill-ku waxa uu ku qalabaysan yahay kontoroolka fog-fog iyo 12 nooc oo u oggolaanaya xawaaraha iyo habaynta wakhtiga.
Bandhigga LCD ee 1.4-inch wuxuu muujinayaa xawaaraha, waqtiga, masaafada la safray, iyo kalooriyada gubtay.
PetSite waxay ku faantaa awoodeeda joogsiga degdega ah. Furaha badbaadada ee console-ka waa la goyn karaa meel kasta si loo joogsado mishiinka lagu tumayo. Waxay la timid saddex dherer oo sal ah oo la hagaajin karo si loo daboolo baahiyaha noocyada kala duwan ee eeyaha.
Labada dhinac waxay ka kooban yihiin 600D oo oxford ah oo aan biyuhu lahayn oo laga saari karo.
PetSite waa calaamad.
Waxa ku jira 12 hab oo horay loo sii qorsheeyay.
Nidaam amni oo aan laga adkaan
Control Panel iyo LCD Muujinta
Saldhiggu waa dherer-lagu hagaajin karaa saddex boos.
Dhinacyada dhinac ee aan biyuhu lahayn, marada Oxford laga saari karo
Waxay leedahay dhisme aad u adag
Mashiinku waa sahlan yahay in la dhiso
Wuxuu ku caawiyaa eygaaga inuu lumiyo miisaanka iyo ilaalinta miisaan caafimaad leh
Waxaa ka maqan xulashooyin lagu hagaajinayo xagasha leexleexda.
Treadmill Eyga BingBing wuxuu ku habboon yahay eeyaha cabbirkoodu yar yahay ama dhexdhexaad yahay. Cutubka waxaa ku jira habka is-xiridda iyo caqabadaha waara ee amniga dheeriga ah. Meesha lagu socdo ee treadmill waxay qiyaastaa 40 inji oo dherer ah iyo 17 inji oo ballac ah.
Waxay leedahay muuqaal LCD ah si loo xakameeyo habboon. Qalabka lagu tumanayo wuxuu u shaqeeyaa aamusnaan mana ka didin doono eygaaga inta lagu jiro kalfadhiyada treadmill.
Magaca Sumada: Binging
7.5 mayl saacaddii xawaraha ugu badan 0.5 mayl saacaddii xawaarihiisa ugu badan
Cabirka goobta orodka: 40″ L x 17″ W
3/4 matoorka HP
Muujinta LCD ee nidaamka badbaadada ayaa lagu daray.
Hagaajinta leexashada waxaa lagu sameeyaa gacanta.
Treadmill oo leh matoor
Ku habboon eeyaha yaryar iyo kuwa dhexdhexaadka ah
Ku habboon jimicsiga maalinta-roobaadka
Waxay ka hortagtaa dhicitaan
Mashiinkan laguma talinayo noocyada eyda waaweyn
AKHRI: bulldogs si dabiici ah ma u dhali karaan? 5 siyaabood oo lagu caawin karo eyga dhalmada
SRFDD Dog Treadmill wuxuu leeyahay matoor deggan oo ku habboon eeyaha waaweyn ee miisaankoodu yahay ilaa 100 kg. Matoorka treadmill-ka waxaa loola jeedaa inuu aamuso, taasoo ka dhigaysa mid ku habboon eeyaha cabsanaya.
Waxaa laga yaabaa in loo qorsheeyo inuu ku shaqeeyo xawaare u dhexeeya 0.8 ilaa 12 kiiloomitir saacaddii. Awooda kontoroolka xawaaraha badan ee cutubku waxa ay u sahlaysaa in ay ka gudubto socodka una gudubto xawaaraha orodka. Waxay ka caawisaa eeyaha tababarka, jimicsiga, dhimista miisaanka, iyo dayactirka jirka.
Shirkadda / Sumadda: SRFDD
Awoodda fardaha ugu badan: 1.75
100KG ugu badnaan culeyska Xawaaraha: 0.8-12KM/H
Xawaaraha xakamaynta oo leh xawli badan
Is haysta oo la qaadi karo
Muuqaal LCD ah oo nidaamka darawalnimada deggan
Ku habboon noocyada waaweyn
Hawlgalku runtii waa aamusan yahay.
Fudud oo hawlgal ah
Bandhigu waxa uu tilmaamayaa xawaaraha iyo wakhtiga labadaba.
Ku habboon jimicsiga gudaha eeyga
Waxay awood u leedahay inay u adkaysato eeyaha waaweyn.
Aan ku habboonayn meelaha is haysta
Qalabkani maaha mid laalaabi karo
A Ey Pacer Mini treadmill waa hab aad u fiican oo lagu daro jimicsiga eeyga joogtada ah. Iyada oo meel bannaan oo lagu ordo oo lagu qiyaaso 36.6 inji oo dheer iyo 16 inji oo ballac ah, DOG PACER treadmill yar ayaa ku habboon eeyaha miisaankoodu yahay ilaa 55 rodol.
DogPACER-da yar ee lagu tumanayo waa mid cufan oo fudud. Waxay ka kooban tahay "teknoloojiyada laablaaban ee rukhsadda leh" taasoo ka dhigaysa mid fudud oo ku habboon in la kaydiyo.
DogPACER waa calaamad.
42 "x 21.5" x 8.2"
Casaan iyo madow
Eeyaha miisaankoodu yahay ilaa 55 rodol
36.6 ″ L x 16 ″ W aagga orodka
Laalaabida Naqshad meel badbaadinaysa oo la ruqseeyay
Xawaaraha kala duwan: 0.5 ilaa 7.5 mayl saacaddii LCD
Sicir macquul ah
Hubi in caafimaadka eygaagu uu fican yahay
Qalabka jimicsiga eyga oo la isku halayn karo
Ilaalada dhinacyadu waa daciif.
Jidka aan la hagaajin karin
GoPet Petrun PR700 Dog Treadmill wuxuu ku habboon yahay eeyaha tamarta leh ee miisaankoodu yahay ilaa 44 rodol. Waxay ka kooban tahay kontoroolka xawaaraha la hagaajin karo iyo madal ordaya oo profile hoose ah. Tani waxay awood u siinaysaa eygaaga inuu kor u kaco, socdo, oo u ordo cabsi la'aan.
GoPet Petrun PR700 Dog Treadmill waxay ku qalabaysan tahay tignoolajiyada aamusnaanta leh ee u oggolaanaysa hawl-qabad aamusnaan leh. Taayirrada dolly ayaa fududeynaya in la dhaqaajiyo mashiinka lagu tumayo.
Qalabka lagu tumanayo wuxuu faa'iido u leeyahay eygaaga siyaabo kala duwan. Waxay wanaajisaa qeexida murqaha iyo toning, waxay kor u qaadaa firfircoonida, waxayna kordhisaa nolosha.
Intaa waxaa dheer, kontaroolada riix-badhanka waxay bixiyaan koror iyo hoos u dhac xawaare dhexdhexaad ah.
Astaanta GoPet oo ku habboon eeyaha yaryar
Eeyaha miisaankoodu yahay ilaa 44 rodol.
28″L x 16″W Aagga Orodka
Xawaaraha wuxuu u dhexeeyaa 0.6 ilaa 8 mayl saacaddii
Platform leh dherer orod hooseeya
Ku maamul meel fog ama buug-gacmeed
Xakamaynta xawaaraha iyo saacada
Joojinta degdega ah
Waxa ku jira wax-haysta silsiladda eyda.
Muddada dammaanadda ee hal sano
Waxay ilaalisaa meel bannaan
Hawlgallada aadka u deggan, habka wadida aamusnaanta ayaa la isticmaalaa.
Laguma talinayo noocyada waaweyn
PetRun PR725 treadmill ee GoPet waxaa loogu talagalay eeyaha waaweyn oo miisaankoodu yahay ilaa 176 rodol. Waa il fantastik ah oo jimicsi loogu talagalay eeyaha waaweyn ee tamar badan ama cayilan.
Marka cimiladu aysan u oggolaan eeydu inay bannaanka joogaan, qalabkan lagu tumayo waa doorasho aad u wanaagsan. Hagaajin xawaaraha socodka madadaalada ama orodka degdega ah.
GoPet PetRun PR725 treadmill wuxuu la imanayaa taayir dolly ah oo la qaadi karo. Intaa waxaa dheer, waxa ay leedahay isha bir ah oo lagu dhejiyo toy.
Waxay ku habboon tahay milkiilayaasha eeyaha ee aan haysan meel ku filan eydooda. Intaa waxaa dheer, treadmill-ku wuxuu leeyahay dhululubo hawo-Auto-laab ah si loo kaydiyo habboon.
Eeyaha waaweyn oo miisaankoodu yahay 176 rodol.
71′L x 16′W Aagga Orodka
Xawaaraha wuxuu u dhexeeyaa 0.6 ilaa 10 mayl saacaddii
Xagasha waa la beddeli karaa si loo beddelo heerka dhibka.
Naqshadaynta dhululubada hawada si toos ah isku laabma
Haysta Silsiladda Joojinta Badbaadada Degdegga ah
Laguma talinayo noocyada yaryar
Noocyada ugu fiican ee eyga treadmill waa kuwa wax soo saarka muddo dheer, leh sumcad wanaagsan, oo leh noocyo kala duwan oo lagu kala dooranayo.
Shanta nooc ee eyga ugu fiican ee lagu tumanayo 2019 waa:
ProForm waa shirkadda tuman eey ugu fiican. Qalabka lagu tumanayo waxaa si gaar ah loogu talagalay eeyaha waxayna leeyihiin astaamo dhowr ah oo ka dhigaya inay ka soocaan dadka badan. Tusaale ahaan, waxay leeyihiin hab-jilicsan gacanta si eydu ugu tababaran karaan meelaha sare iyaga oo aan tagin buur!
NordicTrack waa soo saaraha hormuudka u ah qalabka jirdhiska iyo agabka.
NordicTrack waa shirkad jimicsi oo diiradda saarta tayada iyo hal-abuurka, waxayna ku jirtay ganacsi in ka badan 35 sano. Alaabta ay soo saarto waxaa ka mid ah elliptical-ka dibadda, elliptical-ka gudaha, baaskiilka taagan, qalabka lagu tumanayo, iyo qalabka kale ee jimicsiga. Shirkaddu waxay u kortay inay noqoto shirkadda ugu weyn ee soo saarta qalabka jir dhiska ee adduunka.
NordicTrack waxay xarunteedu tahay Madison, Wisconsin.
Weslo Cadence G 5.9 Treadmill waa ikhtiyaar ku habboon orodka, socodka, iyo noocyada kale ee jimicsiga. Waa tamashle la awoodi karo oo leh astaamo aad u wanaagsan oo socon doona sanado badan.
Caafimaadka Sunny iyo Fitness waxay ahaayeen kuwa ugu horreeya ee soo saara qalabka jimicsiga ee Aasiya in ka badan 40 sano. Hadda waxay raadinayaan inay ku fidiyaan Waqooyiga Ameerika oo ay eygooda ku tumanayaan mulkiilayaasha xayawaanka.
Qalabka lagu tumanayo eeyaha maaha wax aad aragto maalin kasta. Qalabkan lagu tumanayo waxay u oggolaanayaan dhallaankaagu inuu helo jimicsiga ay u baahan yihiin iyaga oo aan u baahnayn inaad ku qaadato socod dheer.
Xaggee xoogga saaraysaa markaad iibsanayso Treadmill Ey?
Eyda tumanka ugu weyn waa kuwa saaxiibkaagu u isticmaali karo si ammaan ah oo farxad leh. Waxaa jira qaar sifooyin ah oo ay tahay inaad raadiso iyadoo ku saleysan shuruudahaaga.
Baaxadda Eyga iyo Dhererka Raadku
Way fiicnaan lahayd haddii aad doorato treadmill doggie oo ku habboon cabbirka eygaaga. Isirka dhexdiisa, eeyaha gaarka ahi way ku kala duwanaan karaan cabbirkooda.
AKHRI: Muxuu Eeygeygu Albaabka agtiisa u seexdaa? 5 Waxyood Oo Aad Ogtahay
Kahor intaadan wax gadan, u fiirso cabbirka treadmill-ka iyo awoodda miisaankiisa. Inta uu bato cabbirka eyga, waa in ay sii dheeraato raadku in uu ahaado.
Inta badan oo naga mid ah, tumanaha eyda waxay leeyihiin ujeedo labaad. Marka aan la isticmaalin, waxa laga yaabaa inay u baahdaan in la kaydiyo. Naqshado is haysta iyo kuwa laalaabi karo ayaa kaa caawin doona kaydinta mishiinka treadmill.
Noocyo badan ayaa ka kooban taayiro isku dhafan, kuwaas oo kuu ogolaanaya inaad si degdeg ah u simbiriirto marka loo baahdo.
Eyda lagu tumayo oo leh meel sare ayaa siinaya eeygaaga jimicsi aad u adag. Soojiidashada ayaa si gaar ah faa'iido u leh haddii eeygaagu isku dayayo inuu yareeyo miisaanka. Intaa waxaa dheer, waxay u fiican tahay riixida magaalada iyo tababarka firfircoonida.
Eeyo badan ayaa ka welwela sanqadha garaaca. U fiirso mishiinka lagu tumayo eeyga kaas oo leh qaylada hoose iyo mishiinka aamusan.
Caadi ahaan, kuwa lagu tumanayo eeydu waxay wataan dammaanad lix bilood ilaa hal sano ah. Way fiicnaan lahayd haddii aad go'aamiso qaybaha uu dammaanadku daboolayo. Tani waxay ku iman doontaa anfaca haddii ay dhibaato jirto ama haddii aad u baahan tahay shay beddelka ah.
Iyadoo mashiinadu ay soo bandhigaan tirokoobyo muhiim ah oo kala duwan oo ay leeyihiin astaamo kala duwan, cabbirka bandhigga konsole ayaa ah qaybta ugu qaalisan ee qalabka lagu tumanayo.
Bandhigyada waaweyni way sahlanaan karaan in la akhriyo waxayna soo bandhigi karaan macluumaad dheeraad ah isku mar, taas oo gacan ka geysata korodhka kharashka.
Xakamaynta xadhigga; ha ka xidhin. Daar mashiinka lagu tumayo ilaa heerka ugu hooseeya oo dheh "diyaar." Markaad hor taagan tahay mashiinka lagu tumayo, ku dhiiri geli eygaaga inuu hore u socdo. Si tartiib tartiib ah u kordhi xawaaraha marka eeygaagu uu caadeysto inuu ku socdo mashiinka treadmill. Hoos u dhig haddii eeygaagu uu muujiyo calaamadaha welwelka.
Haddii eeygaagu uu ka baqayo, billow dib u habeyn si aad u aragto treadmill inuu yahay shay wanaagsan. Ku dar mashiinka lagu tumayo hawlaha eygaaga si taas loo gaaro.
Joogitaanka mashiinka treadmill, cunto, cunto fudud oo gaar ah, iyo feejignaan dheeraad ah waa in la bixiyaa.
Markaad eygaaga dul saarto mashiinka treadmill, muddada socodku waa inuusan dhaafin 30 daqiiqo. Si kastaba ha ahaatee, waxaad samayn kartaa laba kalfadhi maalin kasta.
Intaa waxaa dheer, tababarayaal xirfadlayaal ah ayaa kaa caawin kara inaad u soo bandhigto layligan eygaaga. Waxaan kaa niyad jabin lahaa inaad eygaaga ku qasabto inuu ku ordo mashiinka lagu tumayo, laakiin socod dheer oo wanaagsan ayaa faa'iido leh.
Waxa suurtogal ah in qaylada mishiinku ay dhegaha ka xanaajiso. Taas beddelkeeda, waxa laga yaabaa in dhaqdhaqaaqa jidhkaaga degdega ah uu ka xanaajiyo iyada. Eeygeygu maalin walba wuu naxaa marka ninkeyga uu sheeko u sheego; waa inuu istaagaa, oo gacmihiisa lula, oo aad u hadlaa. Intaa waxaa dheer, way quudhsataa markaan faaruqiyo.
"Treadmills waxay noqon kartaa hab aad u fiican oo lagu bixiyo jimicsiga jirka oo dhan ee eygaaga iyada oo aan saameyn. Qalabka treadmill-ka waxaa loo isticmaali karaa in lagu diiriyo eygaaga ka hor inta aan la khiyaanayn tababarka, ciyaaraha eyda, ama socodka dheer ama socodka." Johnson waxa ay sidoo kale isticmaashay mishiinka lagu tumayo si ay eydeeda uga kabsato ka dib markii la dhaawacay.
Waa mamnuuc maadaama ay yihiin qalab tabobar oo inta badan ay isticmaalaan dogfighters. Sababo la xiriira isticmaalka baahsan ee mashiinka lagu tumayo ee xoogga iyo tababbarka dulqaadka, waxay had iyo jeer joogtaa marka ay booliisku weeraraan eeyaha dagaalka.
Intaa waxaa dheer, tababarayaal xirfadlayaal ah ayaa kaa caawin kara inaad u soo bandhigto layligan eygaaga.
Waxaan kaa niyad jabin lahaa inaad eygaaga ku qasabto inuu ku ordo mashiinka lagu tumayo, laakiin socod dheer oo wanaagsan ayaa faa'iido leh.
Ballaca tumanaha eyga wanaagsan waa inuu ka ballaaran yahay kan bini'aadamka si uu ugu oggolaado eyga inuu "fadlan"hor iyo dib u si xor ah u lulaya iyo in lagu dhiirigeliyo eyga inuu gaaro oo uu fidiyo. Qalabka lagu tumanayo bini'aadamka ayaa caadi ahaan aad u cidhiidhya, xaddidaya dhaqdhaqaaqa.
Treadmills waa hab aad u fiican oo aad ku jimicsato cunuggaaga marka aadan awoodin inaad dibadda u qaado. Si tartiib ah u bilow oo bar inuu si nabad ah ugu socdo mishiinka lagu tumayo si togan oo madadaalo leh. Dhallaanka ku jira qalabka lagu tumayo waa in mar walba lala socdo.
Markay eygooda socdaan dhowr jeer wiiggii, milkiilayaasha eyda waxay goostaan ​​faa'iidooyin caafimaad iyo bulsho oo kala duwan.
Faa'iidooyinka waxaa ka mid ah jimicsiga wadnaha oo kordha, cadaadiska dhiigga oo yaraada, murqaha iyo lafaha oo xoog badan (ku horumaray socod joogto ah), iyo cadaadiska oo yaraada. Socod maalinle ah ayaa muhiim u ah sidoo kale fayoobida xayawaankaaga.
Inta badan dhakhaatiirta ayaa ku jawaabi doona, "Haa, eeydu waxay isticmaali karaan mashiinka bini'aadmiga." Inta badan eeyaha waxaa lagu tababari karaa qalabka lagu tumayo korontada, labadaba biyaha hoostooda iyo kuwa lagu tumanayo (laakin waligood ma isticmaalin naqshadda treadmill ee gacanta).
Waa muhiim inaad ilaaliso xayawaankaaga rabaayada ah markay socdaan oo waligaa ha ka tegin.
Qiimaha qalabka lagu tumo waxay u dhexeeyaan $149.99 ilaa in ka badan $3,000. Qalabka gacanta lagu tumayo aad ayuu uga qaalisan yahay kuwa lagu tumayo mootada, si kastaba ha ahaatee, waxa ay ka maqan yihiin sifada iyo kartida mishiinka lagu tumo.
Mashiinnada lagu tumayo ganacsiga iyo kuwa lagu tunto ee tayada ganacsigu waa qaali.
Asal ahaan, haddii aad rabto in aad kharash garayso wax ka yar $1000, waxa aad soo iibsanaysaa mishiinka lagu tumayo ee la tuuri karo.
Waxaa laga yaabaa inaad ka faa'iidaysato hal sano haddii aad nasiib leedahay. Bixinta u dhow $ 2000 - ama laga yaabee in ka badan - waxay ku helaysaa tayada, sifooyinka, iyo kalsoonida. Matoorada lagu tumanayo raqiisku waxay ku shaqeeyaan xadiga ugu badan, kaas oo isla markiiba dabar go'a.
Dhamaadkii. Xilliga fasaxa jiilaalka, shaki la'aan, waa waqtiga ugu fiican ee lagu iibsan karo mashiinka treadmill ama mashiinka jimicsiga, sida uu qabo Colleen Logan, madaxweyne ku xigeenka suuq-geynta ee iFit tababarka farsamada. Taasi waa marka dalabka iyo iibku aad u kordho.
Views Views: 2,707
faa'iidooyinka isticmaalka treadmill xayawaanka
faa'iidooyinka isticmaalka qalabka lagu tumanayo eeyaha
faa'iidooyinka isticmaalka treadmills ee eeyaha
hagaha jimicsiga eey ku tumasho
dib u eegista treadmill eey dibadda
meelaha bannaanka lagu tumo ee eeyaha
ugu sareeya ee lagu tumanayo
treadmill ee xayawaanka rabaayada ah
waa maxay kharashka ku baxa mishiinka lagu tumayo
article PreviousSida Looga Hortago Walaaca Kala Tagga Xayawaankaagu (2022)
Next articleTalooyin ah in Had iyo jeer niyada lagu hayo Marka Tababarka Eyda 2022
Ma siin karaa eygeyga hal marshmallow? Waa maxay sababta ay khatar ugu yihiin eeyaha
Schnauzers ma la socdaan xayawaanka kale ee qoyska?
11ka Eey ee ugu Wanaagsan Beerta - Hagaha Ugu Dambeeya
8da Eey ee ugu Saaxiibka badan ee Dadka Waayeelka ah 2022